Diyaar-garowga Xuska Dhalashada Nebigeena Muxamed (SCW) oo Dalka Ka Socota | Calanka Somalia
← Mareykanka: Dowladaha safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti waxaa ay Somalia ka leyihiin dano gaar ah.
Dowladda Soomaaliyeed Waa inay la Heshiisaa Urur-ka Al-shabaab →
Diyaar-garowga Xuska Dhalashada Nebigeena Muxamed (SCW) oo Dalka Ka Socota
Xuska Munaasibada dhalashadii Nabigeeni Muxamed (SCW) ayaa ku beegan maalinta Sabtida oo bisha Rabiicul-awal tahay 12, islamarkaana waafaqsan 4 Bisha feberaury 2012,waxaana ka socda hawlo si weyn loogu diyaar garoobayo Somaliland iyo guud ahaan Dunida Islaamka.
Munaasibadan oo ah mid Qiime wayn ugu fadhida dadka Islaamka ah maadaama ay tahay Habeenkii uu Dhashay Rasuulkeenii Suubanaa ee la inoogu soo dhiibay Risaalada Islaamka, isaga oo ahaa Rasuulkii ugu dambeeyey ee la soo diray uguna fadli badnaa Anbiyadii ilaahay umaddaha u soo diray oo dhan waxa lagu wadaa in la oogo Munaasibado iyo xaflado kala duwan, iyadda oo maalinta sabtida ahna caadiyan shaqaalaha iyo ardayda la fasaxo, si loo weynayo xuska dhalashada nebigeenii Suubanaa N.N.KH.
Waxaana hawsha u diyaar garawga wada gudi culimo ah oo Warbaahinta ka wacyi gelinaya dadweynaha sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen Xuska maalintan qiimaha leh, waxaanay sheegeen in Xaflad balaadhan lagu qaban doono magaaladda Hargeysa, islamarkaana lagu qaban doono Gobolada dalka.
waxana la filayaa in maalmahan uu socdo Xuska Nabigu iyada oo Culimadu oogi doonto xaflado lagu soo bandhigayo Siiradii Rasuulka (SCW) oo dadka si weyn loogaga dhaadhicinayo fadliga Dhalashadii Rasuulka(scw) isla markaana laga Akhriyeyo Digri iyo Qasaa’id Nebi amaan ah oo lagu weynaynayo Xuska Dhalashadii Nebiga oo waajib ku ah dhamaan Dadka Muslimka ah meelkasta oo ay joogaan.